Muri pano: musha / Technology News / famba / Fossil Gen 6 ongororo: Pedyo ipapo
Zvinoita sezera kubvira fashoni brand, Fossil, yakatanga kupinda mumusika we smartwatch. Mune dzimwe nzira yaitoonekwa semuponesi weGoogle Wear OS system yekushandisa. Pamwe chete nemhando dzayo dzakati wandei - dzinosanganisira Diesel, Skagen naMichael Kors - Fossil Group yakaburitsa smartwatches yaitaridzika kunge wachi chaiyo. Kusiyana nevaya vakatangwa nevakawanda vevazhinji-mazita tech vanogadzira.
Muna 2021, zvisinei, rondedzero yakachinja. Google yakabatana neSamsung kugadzira iri nani yekushandisa sisitimu inosanganisira maficha akawanda maererano ne Apple Watch kupfuura chero imwe yapfuura Wear OS vhezheni. Dambudziko reFossil, zvisinei, nderekuti haina iyo inomhanya pawachi dzayo dzichangoburwa. Saka, neiyo yekare vhezheni yeWear OS, iyo Gen 6 edition watches inganyatso kukwikwidza?
44mm kesi yesimbi isina simbi
22mm tambo yekuburitsa-nekukurumidza
3ATM isina mvura
Iri mukugadzira iwe uchaona iwo chete chaiwo mutsauko unobatika pakati pemhando dzakasiyana muFossil's Gen 6 mutsara. Nekuti mawachi ese anoshandisa zvinhu zvakafanana zvehardware - senge masikirini, mamonita ekurova kwemoyo, mabhatiri uye majaja.
Yedu chaiyo yekuongorora unit ndiyo yakajairwa Fossil Gen 6 wachi mune nhema, iyo ine nhema silicone bhendi uye dema anodised aluminium kesi. Mamwe mavara akasiyana anowanikwa, anosanganisira ane kesi yesirivha uye tambo yedehwe yebrown. Chero ipi modhi yaunoenda, zvisinei, hapana chinokutadzisa kusarudza yako tambo.
Sezvo zvave tsika kune mazhinji emazuva ano smartwatches iyo Fossil Gen 6 ine nekukurumidza-kuburitsa 22mm tambo iri nyore kubuda uye kutsiva nechero imwe ingangotora fashoni yako.
Magumbeze anoabata akatenderedzwa uye akatsikirira, saka usasiye yakawandisa mukaha pakati pechanza chedu nesimbi. Izvo zvinosanganiswa nekesi yakapfava kugadzira wachi ine compact uye yakaderera chimiro. Nekuda kweizvozvo wachi haimbonzwa yakakura uye yakakura semamwe emhando dzemugadziri wekare, saka inotaridzika zvakanaka pamasaizi mazhinji emaoko.
Mupendero wakakomberedzwa wakatenderedza bevhero kumberi, ichipa wachi imwe yekuwedzera magadzirirwo, nepo mabhatani matatu anogara kumucheto kwekurudyi - repakati richiitawo sekorona inotenderera. Aya mabhatani akakwana zvakakwana uye baya zvakanaka kana adzvanywa. Iyo yepamusoro inotangisa hutano snapshot nekusarudzika, nepo bhatani repasi ndere kukurumidza kuburitsa GPay yeNFC-based contactless kubhadhara. Semazuva ese, bhatani repakati/korona nderekutanga rondedzero yeapp yako uye kudzokera kuchiratidziro chekumba.
Nekudaro, pane kunyunyuta kumwe chete pamusoro pemabhatani: ari nyore kudzvanya netsaona. Isu taigara tichizviwana isu tave netsaona yekumisikidza Google Mubatsiri kana tapeta maoko edu kumashure, semuenzaniso.
Ratidza uye software
1.28-inch kutenderera AMOLED skrini
Pfeka OS neGoogle
Sezvo zviratidziro zvewachi zvichienda, iyo AMOLED pani paFossil Gen 6 yakanaka kwazvo. Iyo ine yakadzika chaizvo, inky matema ayo anouya kumberi kana imwe yeakasviba kumeso kwewachi yasarudzwa, kana kana iyo inogara-pakuratidzwa yakavhurwa. Iro dema rinosangana nebezel dema rakaitenderedza kuita rima risina musono.
Zvimwe zvezviso zvewachi - senge Hombre face inoratidzwa pazasi - inoratidzira ruvara runobatanidza kune yakasviba kumashure. Inoita kuti iite senge furemu, skrini uye ruvara zvese zvinosangana pamwechete.
Mune dzimwe nzira, zviso zvewachi ndizvo zvine simba reFossil. Pane akati wandei sarudzo dzaunogona kusarudza ipapo ipapo pasina kuenda kuPlay Store kudhawunirodha zvimwe. Uye mune akawanda akasiyana masitaera, mazhinji ane ambient anogara-pachiso anotanga mushure memasekondi mashoma ekusaita basa.
Kana pane imwe nzvimbo isina simba, iko kushaikwa kwekugadzirisa. Asi zvakawanda zvezvipimo izvi zviri pasi pekuoma kwezviso zveFossil. Mazhinji awo anoratidza akaomesesa gradients, akaturikidzana uye shading, uye saka kana iwe uchienda kunoagadzirisa, iwe unongotora mashoma emavara akasiyana ekusarudza kubva. Ndicho chinhu chimwe chete chinogona kuchinja kana Fossil yakazopa yazvino vhezheni yeWear OS (iyo iyo, panguva yekunyora, inongowanikwa pa Samsung Galaxy Tarisa 4).
Uchitaura izvozvo, chikamu chemufaro weWear OS ndechekuti iwe une sarudzo yekutarisa Play Store uye nekuisa chero yemazana ezvechitatu-bato zviso zvewachi, mazhinji acho ane granular customization, nekudaro achikubvumidza kuti uchinje wachi. ruvara rwekumashure, matauriro uye matambudziko.
Zvikasadaro inyaya yakajairwa Wear OS, neGoogle's Discover feed kuruboshwe rwechidzitiro chekumba ichikupa zvigadziriso, uye tarisa skrini/mawijeti kurudyi kwechidzitiro chekumba. Iwe unogona kuwedzera / kubvisa iwo aunoda - saka kunyangwe iwe uchida kutarisa nekukurumidza mamiriro ekunze, hurongwa hwako huri kuuya, chiitiko chezuva nezuva, kana kutanga kurovedza muviri, zvese zviripo.
Iwe unogona kubatanidza neAroid kana iPhone, asi ruzivo rwekupedzisira rwakanyanya kudzikamisa. Android pairing zvinoreva kuti iwe unogona kuverenga uye kupindura kune mameseji uye zviziviso kubva kune mameseji mameseji, nepo muganho neApple's iOS zvinoreva kuti unogona kungoona zviziviso pane kupindura zvakananga kubva pawachi.
Utano uye hupenyu hwebheteri
1GB RAM uye kuchengetedza 8GB
24 bheri yehupenyu hupenyu
Fossil Gen 6 iri pakati pekutanga smartwatches kuratidza Snapdragon Wear 4100+ processor, ichiita kuti ikurumidze uye iite zvinoenderana kupfuura vaitangira. Pane mutsauko unoonekwa kana uchienzanisa neyekare Wear OS modhi.
Kuisa runyoro rwemapurogiramu kunowedzera nekukurumidza kana iwe ukadzvanya korona yepakati, uchitsvaga uye nekuisa maapplication kubva kuPlay Store zvakare nekukurumidza, nepo pa-screen animations ichiita seyakapfava. Iko hakuna kuderera kudiki kwataimboona muGen 5 kana zvizvarwa zvekare.
Wedzera izvo kune yayo runyorwa rwemabasa uye iyo Gen 6 inonzwa seyakanyatso batsira smartwatch. Google Pay, semuenzaniso, iri nyore chaizvo. Kana wangoseta, unongodzvanya bhatani repazasi wobva wabata wachi padhuze neasina kuonana terminal kuti ubvumidze kubhadhara.
Haufanire kunyora PIN yako pese paunoivhura, chero wanyora PIN yako paunoisa wachi yako mangwanani. Ichaona kana yabviswa pachiwoko chako kana iwe (kana mumwe munhu) akaibvisa, uye wokumbira PIN yako zvakare nguva inotevera.
Pane Wi-Fi mubhodhi yekubatsira nekumhanya kwekudhawunirodha maapuro, zvirimo uye zvigadziriso, uye yenguva dzose yeBluetooth audio yekubatanidza kuitira kuti iwe ugone kushandisa wachi yako kupindura nhare kubva pawachi yako yemapeya. Zvese mune zvese, iyo yakasimba ficha seti.
Kana paine imwe nzvimbo inogona kuvandudzwa, hupenyu hwebhatiri. Isu takanga tichinetseka kuwana zvakawanda kupfuura zuva rekushandisa kubva mubhatiri rakazara. Saka kana iwe uchida kushandisa wachi kutarisa kurara kwako husiku hwese, uchapedza nguva shoma zuva rinotevera uine wachi iri kubhadharisa.
Kana iwe ukaenda neiyi sarudzo saka nekutenda haufanirwe kumirira kwenguva yakareba sezvawaisiita kuti izadze zvakare. Kana isina chinhu, Gen 6 inogona kusvika pa80 muzana yekuchaja mumaminetsi makumi matatu chete, inova shanduko huru pamusoro pezvizvarwa zvekare. Iyo yekuchaja nzira ichiri yakachipa-inotaridzika yemagineti yekuchaja disc ine mapoinzi ekusangana mairi.
Kana iwe usingade kuteedzera kurara, kana kumuka nebhatiri rakaderera mangwanani, unogona kungoenda kune defacto kuchaja-it-husiku sarudzo, ichipa iyo inokurumidza kuchaja yakawandisa.
Fitness uye hutano hwekutevera
GPS, Altimeter, Gyroscope uye Compass
Mwoyo Mwero uye SpO2 sensors
Kuve WearOS zvinoreva kuti unogona kudhawunirodha nekuisa chero nhamba yemapurogiramu ekutevera kusimba pawachi yako, ungave uchida Strava, Nike Run Club kana imwe, pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekusarudza kubva. Asi kwezuva rega rega, kutevedza kwezuva rose, kune nzira mbiri dzekudzika.
Fossil ine yayo Wellness maficha akamisikidzwa pawachi dzayo dzemazuva ano, ichipa yakaringana akatevedzana maficha seyakakosha Workout tracking, nhanho kuverenga, yekurara yekutevera uye yekutarisa kurova kwemoyo. Nyaya chete: iyo data haina kwainoenda, inongogara paruoko rwako. Saka sekubatsira sekuve pawachi yako, haugone kuona iyo data pafoni yako, kana kuiwiriranisa kune imwe sevhisi.
Iyo yakachengeteka bheti ndeye kushandisa Google Fit pachinzvimbo, izvo zvinoda zvishoma kukakavara nesoftware, kubvisa Wellness widget kubva kune widget skrini uye kutsiva iwo nemabasa akafanana kubva kuGoogle. Nenzira iyi, kana iwe uchiteedzera zviitiko zvako zvezuva nezuva, zvinowiriranisa neGoogle Fit pafoni yako.
Kune iyi mhando yekutevera, iyo Gen 6 inoshanda zvakanaka. Ichakupa tarisiro yakanaka yekushanda kwauri kuita uye inoshandisa iyo yemoyo mapoinzi system iyo inoyera kusimba kwekuita kwako uye kuyedza kukukurudzira kuti usangane neavhareji yevhiki chinangwa, pane kurova chinangwa chemazuva ese zuva rega rega. Nekudaro, kune avo vanoda kuteedzera zviitiko chaizvo sekumhanya kana kuchovha bhasikoro, pane zvirinani sarudzo kunze uko.
Isu takawana iyo Gen 6's GPS kuita kwakashata mukuenzanisa nemamwe wachi dzatakaedza mumakore mashoma apfuura. Kunyangwe pamapfupi mapfupi 3.5km epakati masesheni aive kure nechiratidzo, kazhinji achiyera 300-500 metres kure newachi dzedu kubva kuGarmin, Samsung neHuawei.
Kutarisa pamepu yenzira mushure mekuita kuti zvive pachena kuti kutsvaga kwenzvimbo kwakanga kusingaenderani, nemigwagwa yakatwasuka inoratidza mitsetse yenzira inoputika munzvimbo yose. Haisiwo wachi yatingakurudzira kuita zviitiko zvekunze zvakakomba.
Fossil's "yepamberi" Wear OS smartwatches achangoburitsa paAmazon